पत्याउनै गाह्रो ! यस्तो मन्दिर जहाँ वैज्ञानिक सँग मुर्ती बोलेर हैरन - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
अडियो / भिडिओ
जोक तथा कार्टून
अनौठो समाचार / मनोरन्जन / विदेशको समाचार
पत्याउनै गाह्रो ! यस्तो मन्दिर जहाँ वैज्ञानिक सँग मुर्ती बोलेर हैरन
by ratoपिरो · August 31, 2017
मन्दिर त तपाईले धेरै देख्नुभयो होला । आज हामी त्यस्तो मन्दिरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ जुन तपाईलाई थाहा छैन । संसारमा एक यस्तो मन्दिर छ जहाँ मूर्ति मानिस झै बोल्छ ।
पहिला यो कुरामा धेरैलाई पत्यार लागेन । तर, अहिले भने वैज्ञानिकहरुले पनि त्यो मन्दिरमा मूर्ति बोल्छ भन्ने कुरा पत्याए । मन्दिर परिसरमा कोही नभएको बेला शब्द गुन्जने गरेको छ ।
त्यो मन्दिर तन्त्र साधनाका लागि प्रसिद्ध बिहारको राजश्वरी त्रिपुर सुन्दरीको मन्दिर हो । यो मिन्दुरमा सुनसान भएको बेला मूर्तिबाट आवज आउने गरेको बताइएको छ ।
मध्यराति जब मानिहरु यहाँ जान्छन् उनीहरुले त्यहाँ आवज सुन्छन् । यो कुरा पुष्टि समेत भइसकेको छ । त्यहाँ मूर्तिहरु एक आपसमा कुरा गरिरहेको सुन्न सकिन्छ । यो विषयमा वैज्ञानिकहरुको एक समुहले अनुशन्धान समेत गर्यो । उनीहरुले समेत मन्दिर आसपास सुनसान भएको बेला आवज आउने गरेको निष्कर्ष निकाले ।
मन्दिरमा केही न कही अनौठो शक्ति रहेको बैज्ञानिकहरु बताउँछन् । उनीहरु पनि यो विषयलाई लिएर हैरान बनेका छन् । यो मन्दिरको स्थापना करिब ४ सय बर्ष पहिले भएको थियो । यो मन्दिरमा कलश स्थापनाको नियम छैन । तन्त्र साधना यहाँ पुजा गरिन्छ । तान्त्रिक कारणले यहाँ कलश स्थापना गरिँदैन । एजेन्सी
Next story यी ८ व्यक्ति जसले अचम्मको विश्व रेकर्ड बनाए
Previous story यस्तो पनि देश छ, सडक मै बसेर मान्छेको मासु बेच्न थालियो !
Nepali Comedy “डम्पिङ साईड” Part-4– “Damping Side”
Amazing Trees !!! फोटो फिचर….
दुलहालाई पहाडबाट फ्याँक्ने अनौठो पर्व (भिडियोसहित)
हेर्नुहोस् यी आश्चर्यजनक तस्बिरहरु झट्ट हेर्दा पत्याउनै नसकिने
तपाई पनि हेर्नुहोस् ७ लाख भन्दा बढीले हेरेको अचम्मको कामुक कला (भिडियो सहित)
सबै अंग भाँच्ने युबती जीउमा हाड छ कि छैन (फोटो फिचर र आङ नै सिरिङ्ग हुने भिडियोसहित)
16 Outstanding Examples of How to TakeaGreat Vacation Photo
अडियो / भिडिओ / अनौठो समाचार / मनोरन्जन / विदेशको समाचार
मनोरन्जन / विदेशको समाचार
Perfect Picture with Perfect Time
अनौठो समाचार / विदेशको समाचार
योनी नभएकी किशोरीको कहानी, १७ बर्षमा बल्ल पत्तो पाइन
नेपालको समाचार / विदेशको समाचार
शिकारी मोडललाई प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट अभियान
हङकङलाई हराउँदै नेपाल ट्वान्टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा
भ्यालेन्टाइनको बिरोधमा एक घण्टामा २० लाख ब्रा बिक्रि
नेपालको समाचार / मनोरन्जन
नयाँ बर्ष, नयाँ योजना, नयाँ प्रेमिका, नयाँ श्रीमान्
मातेकी श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर टीभी लाइभ !
Amazing Amazing Video jokes suprise news Talent World अंग अचम्म अनौठो आँखा उपन्यास कला कार केटा खुट्टा घर जनावर तस्विर दमिनी दाह्री दुलही दूध नमूना नाङ्गै निर्दयी परम्परा पुरुष बाँदर बाख्रा बालक बिहे भीर महिला मानिस मान्छे युवती योगा रुख रेकर्ड रोचक विचित्र विश्व व्यक्ति सानो सेक्सी
© 2019, RatoPiro.com . All Rights Reserved
यो शुद्ध मनोरञ्जनात्मक ब्लग हो, सत्यता नहुन पनि सक्छ, कसैको व्यक्तिगत जीवनसँग मेल खाएमा हाँसेर उडाइदिनुहोला